Akụkọ - Ngalaba otu Xiamen NEWYEA Group meriri aha nsọpụrụ nke Advanced Grassroots Party Organisation na mpaghara Siming.
Alaka otu Xiamen NEWYEA Group meriri aha nsọpụrụ nke Advanced Grassroots Party Organisation na mpaghara Siming.
[Ozi ọma] Alaka otu Xiamen NEWYEA Group meriri aha nsọpụrụ nke Advanced Grassroots Party Organisation na mpaghara Siming.
Iji mee emume ncheta otu narị afọ nke ntọala Communist Party nke China, n'ụbọchị Julaị 1, Xiamen nwere ọgbakọ ịja mma "mma abụọ na nke mbụ", na -aja ndị Xiamen mma pụrụ iche ndị otu Kọmunist, ndị ọrụ na -ahụ maka mmemme otu na otu pati dị elu.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Xiamen NEWYEA Group Co., Ltd. Kọmitii Alaka, nwetakwara aha nsọpụrụ nke ọgbakọ ọgbakọ ahịhịa nke Xiamen City n'ọgbakọ ito a.
Kemgbe e hiwere ngalaba otu ahụ na 2017, Xiamen NEWYEA Group na -agba mbọ iwulite akara ụlọ ngosi "Ngosipụta NEWYEA", na -agbaso ntuziaka Party mgbe niile, na -akwalite njikọta miri emi nke owuwu Party na mmepe ụlọ ọrụ. N'inwe ụlọ oriri na ọ qualityụ highụ dị elu, ọ na-enye nkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike maka ụlọ ọrụ ga-ebute oke na asọmpi ahịa kpụ ọkụ n'ọnụ.
Oge a, iji zute narị afọ nke oriri ahụ. Alaka otu nke NEWYEA Group abụghị naanị ndị otu pati haziri ka ha na -ekiri ọgbakọ ogbako na -eme emume ncheta otu narị afọ nke ntọala Communist Party nke China. Ha ejikwala ihe ha mere eme eme mmemme ncheta ọmụmụ pati ahụ.
Nkwanye ugwu a abụghị naanị nkwenye nke ọrụ ngalaba otu nke NEWYEA Group, kamakwa mkpali ịkwalite owuwu nke ngalaba ahụ. Anyị ga -ewerekwa nke a dị ka mmalite, mejuputa oge ọhụrụ nke ihe nrụpụta nke otu ahụ na oge ọhụrụ nke ahịrị nzukọ otu ahụ, kwalite mmụọ nke "anọ", "ntụkwasị obi anọ", "mmezi abụọ", egwuregwu ka mma. ọrụ nchekwa nke onye otu komunist, na -aga n'ihu n'ọkwa chaja ikuku iji merie ihe siri ike, ọsụ ụzọ na ihe ọhụrụ, nyere mba ahụ aka iru ebumnuche "carbon carbon", ebumnuche na mbọ "na -anọpụ iche carbon".
Ụnyaahụ bụ ntọala mmemme oriri na ọ partyụ partyụ, ụlọ ọrụ anyị nwetakwara mmeri na mpaghara Siming na -aga n'ihu n'ụbọchị a